Mpianatra miisa 30 hiofana any Maurice - InsPNMad - Madagascar Informations
17 janvier 2016 9 novembre 2016 Madagascar Informations Aucun commentaire
Mpianatra miisa 30 avy eto anivony sekoly ambony INSPNMAD no hanaraka fiofanana atsy amin’ny nosy Maurice amin’ity taona ity
Hisy fiovana ary vao mainka hihatsara ny tontolony fampianarana eto anivony sekoly raha ny nambarany tompon’andraikitra misahana ny ara- sosialy ,ara-tsaina ary ny fitsi-pipifehezana Atoa RAHARISON VIDOT nandritra ny tafa nifanaovana taminy.
Mpianatra voafantina ary voatsonga ireo hanaraka fiofanana atsy amin’ny nosy Maurice ireo ary amin’ny maha sekoly mamaly ny fenitra iraisam-pirenena azy dia voafidy tao anatiny maro ny In.S.P.N.Mad handefa mpianatra hanovo fahalalana any ivelany.
Tanjona ny hitana ny laharana voalohany eo aminy tontolony fampianarana , mba hahatratrarana io tanjona io indrindra ho an’ity taona ity dia hisy ny fanovana ny rafi-pifehezana eto anivony sekoly mba hitoviana lenta amin’ny sekoly any ivelany , voakasik’izany avokoa ny toeram-pampianarana In.S.P.N.Mad rehetra manerana ny nosy .
Androany no nanatanteraka ny fifampiharabana nahatratra ity taona vaovao ity ny teo anivony fitantanana izay niarahana tamin’ny filoha tale jeneraly Atoa RAZANADRAKOTO ROLAND ALBERT sy ny mpampianatra eo anivony Paramed ,polytechnique ,ny gestion ary ny teo anivony douane eto Analamanga.
Amin’ny maha sekoly ambony miahy ny maha olona azy dia ho jerena manokana ny olona mandray anjara mivantana eto amin’ny firenena ka isan’izany ny fampiakarana ny karaman’ny mpampianatra.
Tsy diso anjara tamin’izany ihany koa ny mpiasa tsirairay ka nozaraina akoho sy menaka.
Mialohany fetiny Paska ho avy izao dia hisy ny fitsaboana maimaimpoana ireo olona sahirana ho tanterahana etsy amin’ny lapany tanana Analakely ka hanomezana azy ireo fitsaboana sahaza azy toy ny fanomezana solomaso ka ho tanterahina arakarakin’ny filany marary.
Tsiahivina fa olona noana miisa hatraminy 1 alina no nomena sakafo maimaimpoana manerana ny nosy ny farany taona 2015 lasa teo ary tsy hijanona hatreo akory ny fijeren’ny sekoly ny lafiny maha olona.
← Climat de Madagascar
Tsy misy fampandrosoana raha tsy misy ny jiro →
1 mars 2017 Madagascar Informations 0
FAKANA AN-KERINY ZAZALAHY KELY VAO 03 TAONA MONJA – TRATRAN’NY BC3 IREO NAHAVANON-DOZA